सिके राउतलाई माओवादीसँग दाँज्न मिल्दैनः बोर्णबहादुर
२१ चैत, काठमाडौं । नेपालका मिडियाको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सिके राउतको अन्तरवार्ता लिने टेलिभिजनले विगतमा माओवादी जनयुद्धको उदाहरण दिएर उम्किन नपाउने बताएका छन् ।
विगतमा भूमिगत माओवादीका विषयमा समाचार र अन्तरवार्ता प्रसारण गर्न पाइन्थ्यो भन्ने बाहनामा मिडियाले विखण्डवादको प्रचार गर्न नमिल्ने कार्कीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनले माओवादी जनयुद्ध र सिके राउतको अभियानबारे तुलना गर्दै भने- ‘राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित विचार र क्रियाकलापसँग विखण्डनकारी कुराहरुलाई तुलना नै गर्न मिल्दैन । माओवादीले विखण्डनकारी कुरा गरेका थिएनन् । त्यसैले माओवादीका विचार र क्रियाकलापलाई नेपाली मिडियाले स्थान दिएको उदाहरण दिएर विखण्डनकारी कुराहरुलाई प्रचार-प्रसार गर्न किन नपाउने भन्नु तर्कसंगत हुँदैन ।’
सिके राउतको अन्तरवार्ताले ल्याएको बहसबारे कार्कीसँग गरिएको कुराकानीः
हालै एउटा टेलिभिजनमा प्रशारित सिके राउतको अन्तरवार्तालाई लिएर प्रेस काउन्सिलद्वारा कारवाही अघि बढाएको समाचार आएको छ, अन्तरवार्ता लिँदैमा यसरी कारवाही गर्न मिल्छ ?
टेलिभिजनले प्रशारण गरेको अन्तरर्वार्तामा राउतले खुलमखुला रुपमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सदभावको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तो आपत्तीजनक विचार र भनाइबाट सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन भएको देखिएको हुँदा प्रेस काउन्सिलले कारवाहीको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको हो ।
यसरी कारवाहीका नाममा नागरिकको विचार र स्वतन्त्रताको हनन गर्न पाइन्छ ?
स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतावीच ठूलो फरक छ । स्वतन्त्रतामा अधिकार मात्रै हुँदैन, कर्तव्य पनि हुन्छ । स्वच्छन्दतामा अधिकार मात्र हुन्छ, कर्तव्य हुँदैन । स्वच्छन्दता अराजकतावादी अवधारणा हो । विश्वको कुनै पनि देशमा यो अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छैन । यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई आघात पुर्‍याउँछ । नागरिकले स्वतन्त्रताको प्रयोग अन्य व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई आघात नपुर्‍याउने गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी भएर गर्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि यहि मान्यताबाट निर्देशित हुन्छन् । अन्य देशको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले झैं हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभावलाई खलल पुग्ने गरी विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सिके राउतको अन्तरवार्तामा जे विचार र अभिव्यक्ति आएका छन्, तिनीहरुबाट त्यस्तो व्यवस्थाको खुल्लम खुल्ला उल्लंघन भएको छ । यसबाट विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् होइन, चरम दुरुपयोग भएको छ ।
कुनै पनि नागरिकले बोल्नै नपाउने त कसरी भन्न सकिएला ?
मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभावलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व र कर्तव्य अन्य मुलुकको संविधानले झैं नेपालको संविधानले पनि नेपाली नागरिकलाई तोकिदिएको छ । जसले यो कर्तव्यको पालना गर्दैन र उल्लंघन गर्दछ, उसले नागरिकको हैसियतले प्राप्त गर्ने अधिकार नैतिक रुपले मात्र होइन, कानूनी रुपले पनि गुमाउँछ । यस्तो कर्तव्य पालना नगर्नु राज्य विरुद्धको अपराध हुन्छ र दण्डनीय हुन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि नागरिकले बोल्न पाइँदैन ।
कुनै पनि नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई प्रसारण गर्नु मिडियाको व्यवसायिक धर्म हो । सिके राउतको विचारलाई प्रसारित गर्दैमा कसरी मिडियाले गल्ती गरेको भन्न मिल्छ ?
जुन विचार र अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, आपराधिक हुन्छन्, तिनीहरुको प्रचार-प्रसार गर्नु पनि दण्डनीय हुन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक खण्डता विरुद्ध बोल्ने, क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई कुनै पनि किसिमले सहयोग पुर्‍याउने मतियार पनि कानूनको नजरमा कसुरदार नै हुन्छ । मिडियालाई पनि त्यो छुट हुँदैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा मिडियाले पनि विखण्डनकारीलाई सहयोग पुर्‍याउँनुहुँदैन । ‘राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूल पार्न नहुने’ पत्रकार आचारसंहिताको दफा ४ मा स्पष्ट छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने कार्यहरु आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख छ ।